China ngaphandle camera olulodwa umtshingo ne coolant Gun sokuprakthiza ifektri abakhiqizi | UDeshen
ngaphandle kombhobho owodwa ogqize nge-coolant Gun drill
I-single-edged gun drill (ngemuva kwalokhu ebizwa ngokuthi i-gun drill) isetshenziselwa ukucubungula izimbobo ezijulile ezinobubanzi obungu- ～1 ～ 40mm nobude obude nobude obuyi-100 ～ ama-250 izikhathi. Okwamanje ukuphela kwendlela yokucubungula izimbobo ezincane ezijulile ezinobubanzi obungu- Φ1 ～ 6mm. Ukunemba kwezimbobo zemishini kungazinziswa ku-IT 8 - 10, futhi umuntu ngamunye angafinyelela ku-IT6 ～ 7; ubukhulu bendawo bungazinza ku-Ra12.5 ～ 3.2μm (▽ 3 ～ ▽ 5), futhi ngazinye zingafinyelela ku-Ra0.8 ～ 0.4μm (▽ 7 ～ ▽ 8), ukuqina komgodi kungafinyelela ku-0.05mm / m. Izibhamu ze-Gun zinezinhlobonhlobo zezicelo. Ngaphezu kokucubungula izinto zensimbi ezejwayelekile nokusakazwa, zingacubungula izinsimbi ezithambile, ama-alloy steels, izinsimbi ezingenazinsimbi, nezinsimbi ezingamelana nokushisa.
Langaphambilini umgqomo wokubhola umshini wokumba umgodi ojulile
Olandelayo: umgqomo wokubhola umshini wokumba umgodi ojulile
Umtshingo owodwa Nge-coolant Gundrill
Kungeniswe isibhamu kancane nethuluzi lenduku ye-tungsten carbide ...